Aragtida Islaamka Guurka khasabka Ah
Home Opinion Aragtida Islaamka Guurka khasabka Ah
Diinta Islaamku ma oggola in gabadha lagu khasbo nin aanay rabin ama wiilka lagu qasbo gabadh aanu rabin balse waxaa ay mid kasta u jideysaa xaqa ay u leeyihiin inay doortaan qofka ay rabaan inay guursadaan. Waalidku xaq uma laha inay gabadha ku khasbaan inay guursato nin aanay raalli ka ahayn. Inkasta oo gabadha muslimka ah ogtahay ixtiraamka iyo talada waalidkeedu ka mudanyahay marka ay arkaan nin ku habboon maadaama ay wanaag la rabaan kana waayo-aragnimo badanyihiin ayaa haddana aanay gabadhu uga tanaasulayn arrintaas xaqa ay u leedahay inay doorato oo guursato ninka ay rabto ama jeceshahay.
Waxaa muhiim ah in wiilka iyo gabadhu si wdajir ah ugu heshiiyaan guurka oo aan marnaba la isku khasbin. Guur labada qof la isku khasbo oo gabadhu necebtahay ninkeeda waa guur ku dhisan dulmi waxaana hubaal ah inuu ka madhanyahay jacayl, kalgacal, xasilooni, iyo naxariis, taasuna waxaa ay ka soo horjeedaa wanaagga Eebbe (S.W.T) ugu talagalay guurka muslimiinta. Eebbe (S.W.T) waxaa uu Suuradda Arruum, Aayadda 21aad ku leeyahay, “Oo waxaa ka mid ah calaamooyinka Eebbe inuu idiinka abuuray naftiinna xaasas si aad ugu xasishaan, waxaanu ka yeelay dhexdiinna kalgacal iyo naxariis. Waxaa xaqiiqdii taas ugu sugan calaamooyin [Caddaymo muujinaya jiritaanka iyo awoodda Eebbe] qoomka fekeraya.” Waalidiinta gadhahooda ku khasba guurka aanay rabin ama raalli ka ahayn waxaa ay gabdhahooda ka gelayaan dulmi Eebbe (S.W.T) xaraantimeeyay in la iska galo.
Imaam Al-Bukhaari waxaa uu qisadan hoos ku qoran ka soo qaatay gabadh muslim ah oo noolayd samankii Nebi Moxamed (N.N.K.H) magaceedana la odhanjiray Al-Khansa Bin Khidam. Al-Khansa waxaa ay tidhi, “Aabbahay waxaa uu ii guuriyay wiil uu adeer u yahay oo aanan rabin, markaas waxaan uga dacwooday arrintaas Rasuulkii Ilaahay (N.N.K.H). Dabadeed waxaa uu igu yidhi, “Aqbal guurka aabbahaa kuu sameeyay.” Waxaan ku idhi, “Ma jecli inaan aqbalo guurka aabbahay ii sameeyay waayo ma rabo ninka.” Waxaa uu yidhi, “Haddaba guurku ma ansaxayo haddii aadan rabin ninka, orod oo guurso cidda aad rabto.” [Xigasho: Imaam Al-Bukhaari].
Qisadan gabadha la yidhaahdo Al-Khansa waxaa uu Nebi Moxamed (N.N.K.H) markii hore u sheegay inay adeecdo aabbaheed taas oo ay farayso Diinta Islaamku waana sida ay ku habboontahay marka la eego welwelka waalidku ka qabaan guurka gabdhahooda. Laakiin markii ay Nebi Muxammed (N.N.K.H) u caddaatay inuu aabbaheed ku khasbay guur aanay rabin, waxaa uu gabadha siiyay xornimo ay ku doorato ninka ay rabto si ay dulmiga aabbaheed uga nabadgasho. Qisaduna waa arrin muhiim ah oo gabdhaha la rabo inay ogaadaan inaan waalidkoodu xaq u lahayn inay ku khasbaan guur aanay raalli ka ahayn. Xadiiskanu waxaa uu caddaynayaa in waalidku carruurta ku leeyahay talo marka ay guursanayaan, carruurtana waajib ay ku tahay inay waalidkooda kala tashadaan guurka laakiin aanu waalidku marnaba xaq u lahayn inay gabadhooda ku khasbaan wiil aanay rabin. Guur ku yimaada khasab ama jujuub waxaa uu sida qaalibka ku dambeeyaa burbur iyo furriin.
Haddii gabadhu tahay carmal ama haweeney hore loo guursan waxaa ay leedahay xuquuq ka badan ta gabadha bikradda ah leedahay sida qaalibka ahna waa u madaxbaan tahay arrimaha la xidhiidha guurkeeda. Haweeneyda carmalka ah iyada ayaa u madaxbanaan maamulka guurkeeda kana talinaysa cidda ay guursanayso. Waxaa keliya ee ay u baahantahay waxa weeye in weligeedu u fasaxo ninka ay rabto inay guursato. Laakiin gabadha bikrada ah lama guursankaro ilaa oggolaansho laga helo iyada kaas oo muujinaya inay rabto wiilka. Caa’sha (R.C) waxaa ay weydiisay Nebi Muxammed (N.N.K.H) in gabadha yar ee waalidkeedu rabo inay nin u guuriyaan loo baahanyahay oggolaanshaheeda? Nebi Muxammed (N.N.K.H) waxaa uu ugu jawaabay “Haa! Waa inay bixisaa oggolaanshaheeda.” Dabadeedna waxaa ay tidhi, “Gabadha yar ee bikrada waa ka xishootaa inay is-muujiso.” Rasuulku waxaa uu yidhi, “Aamuskeeda ayaa oggolaansho ah.” [Xigasho: Imaam Al-Bukhaari iyo Imaam Muslim].
Islaamku ma rabo inuu dumarka saaro culays aanay xammilikarin kaas oo ah in lagu khasbo inay guursadaan nin aanay jeclayn sababta oo ah waxaa muhiim ah in la helo guur lammaanuhu iska helaan xagga muuqaalka, dabeecadda, akhlaaqada, xiisaha, iyo himilada. Haddii guurku khalad ku bilowdo oo gabadha lagu khasbo nin ay si dhab ah u dareemayso in aanay rabin ama jeclayn waxaa markaas dhacaya in guurkaasu ku dambeeyo qalalaase iyo furriin. Sidaas oo kale wiilasha laguma khasbikaro gabadh aanay rabin si looga fogaado qoys isna markiiba burbura. Oggolaanshaha gabadha ee guurka waa in la helaa oo aan lagu khasbin nin aanay rabin.
Taariikh: February 21, 2013
(Qormadan waxaa laga soo qaatay buug lagu magacaabo: ARAGTIDA ISLAAMKA: GUURKA IYO GALAMDA oo uu qoray Ibrahim Hassan Gagale soona bixidoona dhawaan IN SHAA ALLAAH)